संस्मरण : जीवनपथका बिर्सन नसक्ने सहयात्रीहरू
– प्रकाशप्रसाद उपाध्याय
संघर्षै संघर्षले भरिएको यस जीवन यात्रामा हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न चरित्र, स्वभाव र उमेरका मानिसहरूको सम्पर्कमा आउनुपर्ने हुन्छ । र यस यात्राकालमा भेटिने यी विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको व्यवहार पनि छुट्टा–छुट्टै हुन्छन्–सहायक, सद्भावनापूर्ण र कहिले अमर्यादापूर्ण । कोही बिर्सनेयोग्य त कोही सदैव स्मरणीय ।
जीवनको प्रारम्भिककालमा बा–आमाले डोर्‍याएर स्कूल पुर्‍याउँदा हामी शिक्षक र सहपाठीहरूको सम्पर्कमा आउँदछौँ । कुनै–कुनै शिक्षक आजीवन स्मरणीय हुन्छन् भने केही सहपाठी । शिक्षार्जनको क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा हाइस्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय पुग्ने क्रममा पनि नयाँ मार्गदर्शक र सहपाठीहरूको सम्पर्क र प्रभावबाट अनुभव प्राप्त गर्दै ज्ञानवान् हुन्छौँ र कमाई खाने क्रममा सेवामा प्रवेश गर्दा फेरि नयाँ संगति, नयाँ सम्पर्क । कोही स्मरणीय । अनुभव पनि थरि–थरिका । कहिले तीतो, कहिले मीठो, कहिले सुखद, कहिले विरक्तिपूर्ण । यसरी जीवनले प्राप्त गर्ने गतिमा विभिन्न खालको अनुभव र संघर्षले पनि स्थान ओगटिन थाल्दछन् । आकाशवृष्टिको वातावरण नभएको कार्यालय पर्दा अर्थाभावले पारिवारिक वातावरणको मिठास हराउन थाल्दछ र नयाँ कार्यालयको तलासले अवसादको वातावरण पनि उत्पन्न गर्दछ ।
जीवन–पथको यो यात्रा म मनुवाको निम्ति पनि अनेक अनुभवको पोको प्रमाणित भएको छ । कर्म क्षेत्रमा अग्रसर हुँदा योे बाटो सहज महसुस नभए पनि यस मार्गमा हिँड्दै गर्दा यस्ता अनेक अग्रज एवम् कनिष्ठ पात्रहरू भेटेँ, जसका सदभावनापूर्ण व्यवहारले मेरो निम्ति मलमको काम गरे, मेरो पीडा विस्मृतिको अङ्ग बन्दै गयो र नयाँ जोशले म अगाडि बढ्दै गएँ । फलस्वरूप मेरो ४६ वर्षको विदेश प्रवास सहज रूपमा बित्यो । र ४२ वर्षको सेवाकालबाट अवकाश पाएर निस्कने अवसर पनि सुखद रह्यो । नयाँ अनुभूति र उत्साहका साथ स्वदेश फर्कें । तर, नौलो परिवेशको जीवनप्रति सशंकित पनि थिएँ । किनभने आफ्नै मातृभूमि, जन्मभूमि भए पनि नयाँ ठाउँका प्रायः जसो अनुहार अपरिचित । जिन्दगीमा अनेकपल्ट छलिएको र ठगिएकोले कसलाई पत्याउने, कसलाई नपत्याउने भन्ने भावले सशंकित पारिरहन्थ्यो । यस नयाँ गोरेटोमा पनि अनेक प्रकारका पात्रहरू भेटिए । सबैजना विभिन्न स्वभावका । तर साहित्य र पत्रकारिताको क्षेत्रका गोरेटामा हिँडने क्रमले मलाई अनेक साहित्यकार एवम् विभिन्न पत्र–पत्रिकाहरूका सम्पादक, उप–सम्पादक र सहायक सम्पादकहरूको नजिक पुर्‍यायो । कतै पारिश्रमिकको व्यवस्था थियो त कतै प्रकाशनको सुख प्रदान गर्ने नियम । म सबै स्थितिमा दङ्ग थिएँ । किनभने कतै देवी लक्ष्मीको कृपा भएको अनुभव हुन्थ्यो त कतै देवी सरस्वतीले प्रकाशनको हर्षका अतिरिक्त आशिर्वाद प्रदान गरेको अनुभूति । मनभित्रको संशय यसरी मेटिँदै जाने क्रममा भेटिए एकजना पत्रकार एवम् युवा राजनीतिककर्मी कुमार रञ्जित ।
गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नव जनवादी मोर्चाका उनी केन्द्रिय सदस्य र म पनि त्यसैसित संलग्न व्यक्ति । दुवै जना पत्रकार भएकोले होला नजिकिँदै गयौँ, र विगत १५ वर्षदेखि मित्रका रूपमा भेटिरहन्छौं । कुमारले अनेक ठाउँमा पुर्‍याए, कतै मञ्चासीन गराए, कतै दर्शक भई बसेँ । यस अवधिमा नव जनवादी मोर्चाभित्रको यात्राकालमा त्यहाँका तत्कालीन सचिव शंकरलाल श्रेष्ठ र केन्द्रिय समिति सदस्य डा. मनोज कुमार ंिसंह (हाल सभासद, २ नम्बर प्रदेश) सितको भेटले पनि हामीलाई एकार्काको नजिक पार्‍यो । डा. मनोज कुमार सिंह हाल मेरो निवास–स्थलकै नजिक बस्ने गरेकाले पारिवारिक मित्र नै बनेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
पत्रकारिताकोे क्षेत्र र पत्रकारिताको कार्यालयमा लेख पुर्‍याउने क्रममा राजधानी राष्ट्रिय दैनिकको विचार–सम्पादक अशोक सिलवालसितको भेट पनि मित्रताको बन्धनमा बाँधिन पुग्यो । एकजना लेखक, पत्रकार, सम्पादक र पर्यटन क्षेत्रमा प्रमुख स्थान बनाई देशको नाउँ पनि विदेशसम्म पुर्‍याउने अशोक सिलवालसित हाल कोरोनाकालका कारण भेट हुन नसके पनि फोनले विगत १२–१४वर्षको हाम्रो मित्रतालाई विस्मृतिको पाटो बन्न दिएको छैन ।
आफ्नो आत्मवृत्तान्त ‘रेडियो जिन्दगी (अल इण्डिया रेडियोमा चार दशक)’ को प्रकाशनको चाहनाले मलाई घोस्ट राइटिङ्गका प्रबन्ध निदेशक कमल ढकालनजिक पुर्‍यायो । उनले सहर्ष पुस्तक प्रकाशित गरे र भृकुटी मण्डपको मैदानमा वि.सं. २०७१ सालमा पुस्तक विमोचन भयो । हाम्रो मैत्री सम्बन्ध आजपर्यन्त कायम छ । कुनै पारिवारिक समारोहमा मलाई आमन्त्रित गर्न उनी बिर्संदैनन् । फोनद्वारा भलाकुसारी भइरहन्छ ।
यी सबैका बीच जीवनयात्रा गतिमान रहिरह्यो र केही यस्ता पात्रहरूलाई पनि भेट्न पाएँ, जससित म उनका कृतिहरूको माध्यम र नाउँले मात्र चिन्दथेँ । भेटघाट थिएन । भेट हुने सम्भावना पनि देखिरहेको थिइनँ । तर उनको नाउँले मलाई उनको सम्झना गराई रहन्थ्यो । ‘को हुन् यिनी, भेट्न पाउने हो कि होइन’ भन्ने भाव जागिरहन्थ्यो । किनभने उनको नाउँसित गाँसिएको उपनाममा केसीसित झा (ब्राइकेटमा) लेखिएको थियो । मानिसहरू उपनाममा ‘व्यथित’, ‘व्याकुल’, ‘गोठाले,’ ‘सुमन’ आदि–आदि लेख्दछन् तर यहाँ त झा पो छ । म हैरान हुन्थेँ । तर एक दिन गजबसित उनलाई भेटेँ नेपाल–भारत पुस्तकालयका अध्यक्ष महेश चन्द्र शर्माको कार्यकक्षमा । आपूmभन्दा वरिष्ठ रहेको अनुभव हुँदा र हँसिलो एवम् उज्यालो अनुहार देख्दा मैले उनलाई अभिवादन गर्दै आफ्नो परिचय दिएँ । उनले पनि आफ्नो परिचय दिए । मैले भेट्न चाहेको व्यक्तित्वलाई यसरी अकल्पनीय रूपमा आपूmसामु पाउँदा म दङ्ग परेँ र आफ्नो भाव प्रकट गर्दै भन्न थालेँ –‘सरसित यो मेरो पहिलो भेट हो, तर तपाईंको एउटा कृतिको झलकले तपाईंसित भेट गराइसकेको थियो र त्यतिबेलादेखि नै तपाईलाई भेट्ने चाहना थियो । आज भेट्न पाएँ । खुसी लागेको छ ।’
बहुआयामीय व्यक्तित्वका धनी डा. इन्दुल केसी (झा)ले जीवनमा कति धन कमाए, त्यो त सोध्ने कुरै भएन, तर उनीबाट उपहारस्वरूप पाएका विभिन्न कृतिहरू पढ्दै गर्दा थाहा भयो – निष्ठाभावसित काम गर्दै सरकारी सेवाबाट निवृत्त डा. इन्दुल केसी (झा)ले बौद्धिक, यौगिक, शैक्षिक, साहित्यिक, धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा अर्जन गरेका सम्पत्तिको अपार भण्डार रहेछ । झन् भजन गायनले त जीवनलाई सङ्गीतमय बनाउँदै त्यसमा पावनताको पनि सञ्चार गराइरहेको रहेछ । यसरी उनको जीवनको यस्तो कुनै क्षेत्र देखिनँ, जसमा उनले हात हालेर यश र जयजयकार प्राप्त गरेका नहुन् । यस्तो व्यक्ति समाजका मात्र नभई राष्ट्रका लागि समेत गौरवका पात्र हुन्छन् । र यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनयात्रामा भेट्दा मनलाई पनि असीम हर्ष प्रदान गरेको छ ।
कोरोनाकालले घरभित्र खुम्चिएर बस्ने स्थिति उत्पन्न गराएको छ । तर मस्तिष्क चलायमान छ । चञ्चल र गतिमान मनले यस अवधिमा आफ्ना विगतका दिनहरूको समीक्षा गर्न घचघच्याइरहन्छ । फलस्वरूप यस क्रममा जीवनमा प्राप्त सफलता–विफलता, मान–अपमान, हेँला–सम्मान, घोचपेच, छेडछाड र लाभ एवम् हानिका घटनाहरू पनि मस्तिष्कमा आइरहन्छन् । जीवन जत्ति लम्बिँदै जान्छ, पथ कण्टकमय, तनावयुक्त र संघर्षपूर्ण हुँदै जान्छ । जीवन–चक्र त झन रहस्यपूर्ण । यसले आगामी दिनहरूको यात्रामा कुन पक्ष (सुख र दुःखको अनुभव) लाई कति बेला प्रकाशमा ल्याउने हो, व्यथित पार्ने हो, कति बेला कुन रोगको सामना गर्न लगाउने हो, कस्ता–कस्ता पात्रलाई सहयात्री बनाउने हो, त्यस्तो पात्रलाई भेटाएर कस्तो अनुभव गराउने हो, केही थाहा हुँदैन । तर गीताको सार, ‘जे होला, राम्रै हुनेछ’ भन्ने उक्ति सम्झिँदै यात्रा जारी राखिराख्ने हो भने, कण्टकपूर्ण पथको यात्राकालमा भेटिने सत्पात्रका कारण पीडा पनि सहनीय हुँदो रहेछ ।
(उपाध्याय वरिष्ठ सञ्चारकर्मी तथा लेखक हुन् ।)